DepositPhotos: उल्टो छवि लुकअपको साथ अफोर्डेबल रोयल्टी-फ्रि स्टक फोटोहरू! | Martech Zone
हामी एक टन को उपयोग गर्छौं रोयल्टी-फ्री स्टक फोटोहरू। हाम्रो साइटहरू, ब्लग पोष्टहरू, ह्वाइटपेपरहरू, साथै हामी ग्राहकहरूको लागि उत्पादन गर्ने सबै सामग्रीहरूबाट, हाम्रो स्टक फोटो बिल महिनौं सयौं डलर थियो। यस्तो देखिन्थ्यो कि मैले खाता भर्ने बित्तिकै, यो एक हप्ता वा भित्र खाली हुनेछ। हामीले प्रख्यात स्टक फोटो साइटको साथ केही मोटा मूल्यहरू तिरेका छौं।
रोयल्टी-फ्री के हो
रोयल्टी मुक्त, वा आरएफ छविहरू, प्रत्येक प्रयोगको लागि भुक्तान नगरी छविहरूको सीमित प्रयोगको अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि हामी हाम्रो साइट को लागी एक रोयल्टी मुक्त छवि खरीद, हामी यसलाई हाम्रो साइट मा र हाम्रो जमानत मा (विक्रेता मा निर्भर गर्दछ) मा र अधिक प्रयोग गर्न सक्छौं। यद्यपि हामी हाम्रो ग्राहकको लागि पुन: बेच्न वा प्रयोग गर्न सक्दैनौं। र यदि हामी यसलाई हाम्रो क्लाइन्टको लागि प्रयोग गर्छौं, हामी यसलाई आफ्नै कपलटरलको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौं। प्रयोगमा राम्रो प्रिन्ट पढ्न धेरै सावधान रहनुहोस्! केही केवल गैर-व्यावसायिक प्रयोगको लागि हो, अरूसँग समय वा सीमित प्रयोगको संख्या हुन सक्छ।
यदि तपाईं तपाईंको रोयल्टी-मुक्त छविहरूमा प्रयोगका सर्तहरू उल्ल .्घन गर्नुहुन्छ भने, तपाईं अधिकारहरूको मालिकबाट चिठीमा हिर्काउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरू सामान्यतया सयौं वा हजारौं डलर यसको दुरुपयोगको बदलामा चाहन्छन् ... र कानुनी कारबाहीको धम्की दिन्छ यदि तपाईंले आज्ञापालन गर्नुभएन भने। धेरै व्यक्तिहरू केवल आफ्ना पाठहरू सिक्छन्, बिल तिर्छन्, र अगाडि बढ्छन्।
रोयल्टी-फ्री स्टक फोटोहरूको कति खर्च हुन्छ?
स्टक फोटोहरू र अधिक प्लेटफर्महरूमा पोइन्ट प्रणालीमा काम गर्नको लागि लागतको विस्तृत श्रृंखला हुन्छ। तपाईंले वास्तवमै क्रेडिटलाई डलरमा अनुवाद गर्न आवश्यक छ। केहि छविहरू को आकार को आधार मा केहि पैसा छन्, अन्य प्रति छवि धेरै डलर हुन सक्छ। र अझै अरूहरू प्रति छवि प्रति लागत लागत हो!
हामीले जति भुक्तानी गरेमा हामीलाई कुनै आपत्ति भएन किनभने हामी जान्थ्यौं कि हामीले गरिरहेको हरेक कुराको बारेमा इमेजरी कस्तो महत्वपूर्ण थियो। मानिसहरु सन्देश को लागी एक सुन्दर छवि को प्रभाव को कम मूल्यांकन गर्न को लागी तिनीहरु कुराकानी गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। र व्यक्ति जसले गुगल छवि खोजी प्रयोग गर्दछ र यसको रोयल्टी-मुक्त खोजमा निर्भर गर्दछ समस्याको लागि सोध्दैछ! धेरै चोटि छविको दुरुपयोग हुन्छ र गुगल छवि खोजीले यसलाई दुरुपयोग साइटबाट पत्ता लगाउँदछ, यो रोयल्टी-रहित हुन्छ कि छैन जब यो छैन।
यो सत्य हो ... एक चित्र हजारौं शब्दहरूको लायक छ
हामी दृश्य संसारमा बाँचिरहेका छौं। त्यसोभए यदि तपाईं सामग्रीको लागि सयौं डलर तिर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, एक सुन्दर छविमा लगानी गर्ने कुनै दिमागी काम गर्ने छैन! र DepositPhotos भर्खरै तिनीहरूको मिश्रणमा एक रिभर्स छवि उपकरण थपियो! फोटोहरू पछाडि, उनीहरूले पनि प्रस्ताव गर्दछ:
भेक्टर छविहरू - ह्विटपेपर वा इन्फोग्राफिक डिजाइन गर्न तिनीहरूको अविश्वसनीय आइकनोग्राफी सेटहरू र अन्यको साथ सुरु गर्नुहोस् भेक्टर छविहरू.
दृष्टान्तहरू - भेक्टरको खाँचो छैन? केवल डाउनलोड गर्नुहोस् रोयल्टी-मुक्त चित्रण तपाईंलाई चाहिन्छ।
भिडियो - तपाईंको साइटमा पृष्ठभूमिका लागि केहि स्टक भिडियो वा तपाईंको अर्को भिडियो मिक्सको लागि केहि स्टक भिडियो समावेश गर्न चाहनुहुन्छ? तिनीहरूले एक ठूलो चयन मिल्यो।
सम्पादकीय फोटोहरू - गैर-व्यावसायिक प्रयोगको लागि केहि छविहरू हेर्दै हुनुहुन्छ? उनीहरूसँग ब्राण्ड र सेलिब्रेटी फोटोहरूको एक ठूलो चयन छ जुन संपादकीय सामग्रीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
संगीत - पोडकास्ट वा भिडियो परिचय र outro को लागी केहि संगीत चाहिन्छ? उनीहरूसँग एक उत्कृष्ट चयन पनि छ!
यो टिम मा थिएन जब सम्म Depositphotos हाम्रो ब्लग र स्टक फोटोहरूको प्रयोगको बारेमा मलाई सम्पर्क गर्‍यो जुन मैले महसुस गरें कि हामी आफु भन्दा धेरै पैसा खर्च गरिरहेका छौं। Depositphotos अब हाम्रो प्रायोजक हो र हाम्रो स्टक फोटोहरू लाई आपूर्ति गर्दै Martech Zone साथै मेरो अन्य कम्पनीहरू। जबकि त्यो हाम्रो लागि अविश्वसनीय सम्झौता हो, तपाईंको लागि मूल्य निर्धारण पनि आश्चर्यजनक छ!
प्रति महीना $ 29 को रूपमा कम को लागी, तपाइँ 30 सम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ रोयल्टी-फ्री स्टक छविहरू Depositphotos बाट प्रत्येक महिना! त्यो एक अविश्वसनीय मूल्य हो र औसत व्यवसायको लागि राम्रो जुन ब्लग पोष्टहरू, ह्वाइटपेपरहरू, केस स्टडीहरू, कल-टु-एक्शनहरू, वेब डिजाइनहरू, र अवतरण पृष्ठहरू उत्पादन गर्दैछ! तपाईंको सन्देशमा रोयल्टी-फ्रि स्टक फोटो थप्नुहोस् र तपाईं देख्नुहुनेछ तपाईंको नतीजाहरू कति सुधार हुनेछन्!
Depositphotos को लागी साइन अप गर्नुहोस्
खुलासा: हामी हाम्रो प्रयोग गर्दैछौं सम्बद्ध लिङ्क यस पोष्टमा DepositPhotos को लागि!
टैग: डिपोजिट फोटोसछविहरू अनलाइन खोज्नुहोस्गुगल छवि खोजीउल्टो छविरिवर्स छवि खोजrfरोयल्टी मुक्तरोयल्टी-फ्री स्टक फोटोहरूप्रायोजकस्टक फोटोहरु